Mpanyimfo—Monnwudwo “Ɔkra a Wabrɛ” | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Angela * yɛ onuawa sigyani a wadi mfe 30 ne kakra. Mpanyimfo aka akyerɛ onuawa yi sɛ wɔbɛba abɛsra no. Onuawa yi retwɛn sɛ mpanyimfo no beyi wɔn ti. Saa bere yi nyinaa ne yam hyehye no. Ebia ɔreka wɔ ne tirim sɛ, ‘Dɛn koraa na mpanyimfo no rebɛka akyerɛ me yi?’ Onuawa yi atoto adesua mu nnansa yi. Afei ɔyɛ obi a ɔhwɛ nkwakoraa ne mmerewa, enti obefi adwuma aba fie na wabrɛ ayɛ kagyaa. Eyi nyinaa nkamfua, ne maame yare nso agyaw no adwinnwen.
Yɛmfa no sɛ woyɛ ɔpanyin na worekɔsra Angela; dɛn na wobɛka de ahyɛ “ɔkra a wabrɛ” yi nkuran? (Yer. 31:25) Nea edi kan koraa no, dɛn na wobɛyɛ de asiesie wo ho ansa na woakɔsra no ahyɛ no den?
GYE BERE SUSUW WO NUA NO HO
Ɛtɔ bere bi a, yɛn nnwuma anaa asafo no mu dwumadi ma yɛn nyinaa brɛ. Yɛmfa odiyifo Daniel nyɛ nhwɛso. Bere bi onyaa anisoadehu bi a na ɔnte ase; eyi ma ɔyɛɛ “kagyaa.” (Dan. 8:27) Dɛn na ɛboaa Daniel? Onyankopɔn somaa ɔbɔfo Gabriel ma ɔkɔkyerɛkyerɛɛ mu kyerɛɛ Daniel na ɔmaa no awerɛhyem sɛ Yehowa ate ne mpaebɔ. Ɔsan ka kyerɛɛ Daniel sɛ Yehowa ‘pɛ n’asɛm paa.’ (Dan. 9:21-23) Bere foforo nso, ɔbɔfo bi kaa asɛm koro no ara hyɛɛ Daniel nkuran.—Dan. 10:19.
Ansa na wobɛkɔ akɔsra onua bi no, gye bere susuw ne ho
Sɛ worekɔsra onua bi a wabrɛ anaa n’abam abu a, wubetumi asuasua nea abɔfo no yɛe no. Ansa na wobɛkɔ onua no hɔ no, gye bere susuw ne ho. Ɔhaw bɛn na ɔrehyia? Ɔhaw yi koraa bɛka no sɛn? Su bɛn na ɛwɔ onua yi ho a ɛyɛ fɛ paa? Onua bi a wɔfrɛ no Richard a wasom sɛ ɔpanyin bɛboro mfe 20 kae sɛ ansa na ɔbɛkɔ akɔsra onua bi no, ogye bere susuw nneɛma a onua no bɔ ho mmɔden paa ho. Afei nso ɔtena ase hwɛ ɔhaw a onua no refa mu. Ɛno ma ohu asɛm a ɔbɛka de aboa no. Sɛ wo ne ɔpanyin foforo yɛ nhyehyɛe sɛ wobɛkɔ akɔsra onua bi a, ɛyɛ papa sɛ mo baanu tena ase susuw onua no ho ansa na moakɔ.
KA WO NUA NO KOMA TO NE YAM
Wunim sɛ ɛnyɛ mmerɛw sɛ obi bɛka nea ɛhaw no. Yɛmfa no sɛ woakɔsra onua bi na ebia fɛre nti ɛyɛ den sɛ obebue n’ano mpo akasa. Dɛn na wubetumi ayɛ aboa no? Ɛsɛ sɛ woma w’anim yɛ sereserew na woka asɛm a ɛbɛka ne koma ato ne yam. Onua bi a wɔfrɛ no Michael a wasom sɛ ɔpanyin bɛboro mfe 40 kae sɛ, sɛ ɔkɔsra onua bi a, asɛm a odi kan ka ne sɛ: “Wunim, ade a ɔpanyin biara ani gye ho ne sɛ ɔbɛkɔ akɔsra ne nuanom wɔ wɔn fie ne wɔn atwetwe nkɔmmɔ na wɔahu wɔn ho yiye. Enti na me ho pere me sɛ bere yi bɛso ma maba.”
Wokɔsra onua bi a, mfiase no ara wubetumi ne no abɔ mpae. Sɛ worebɔ mpae a, wubetumi aka onua no su bi a ɛyɛ fɛ te sɛ ne gyidi, ne dɔ, anaa ne boasetɔ ho asɛm. Saa na na ɔsomafo Paulo yɛ. Sɛ ɔrebɔ mpae ama ne nuanom a, na ɔka nsɛm a ɛte saa. (1 Tes. 1:2, 3) Wo ne wo nua no bɔ mpae saa a, ɛbɛboa mo baanu nyinaa. Ɛbɛma moayi mo yam abɔ nkɔmmɔ. Bio nso mpae no bɛma onua no koma atɔ ne yam. Ray yɛ asafo mu panyin a wasom akyɛ. Ɔkae sɛ: “Ɛtɔ mmere bi a, yɛn nyinaa werɛ fi sɛ yɛreyɛ nneɛma bi a mfaso wɔ so, enti obi ka biribi de kae yɛn a, yɛn ani gye paa.”
MA NO HONHOM MU AKYƐDE
Ɔkwan biako a wubetumi afa so ama onua bi “honhom mu akyɛde” ne sɛ wode Bible bɛboa no; kyerɛwsɛm biako pɛ mpo betumi aboa no. (Rom. 1:11) Sɛ onua bi haw a, obetumi ate nka sɛ ne so nni mfaso. Wokɔsra onua a ɔte saa a, wubetumi ne no akenkan asɛm a odwontofo no kae no. Ɔkae sɛ ɔte sɛ “kotoku a ɛsɛn wusiw mu.” Nanso ɔsan kae sɛ ne ‘werɛ mfii Onyankopɔn mmara nsɛm.’ (Dw. 119:83, 176) Wokyerɛkyerɛ kyerɛwsɛm no mu kyerɛ onua no a, ma onhu sɛ wugye di paa sɛ ɔno nso “werɛ mfii” Onyankopɔn mmara nsɛm.
Yɛmfa no sɛ onuawa bi ate atena; ɔne asafo no mmɔ bio anaa n’ahokeka akɔ fam. Wobɛyɛ dɛn de Bible aboa no? Mfatoho a ɛfa drakma biako a ɛyerae ho no betumi ahyɛ no nkuran. (Luka 15:8-10) Ná wosina sika yɛ kɔnmuade, na ɛbɛyɛ sɛ drakma a ɛyerae no yɛ nea wɔasina yi mu biako. Sɛ wo ne onuawa no susuw mfatoho yi ho a, ɛbɛboa no ma wahu sɛ ne ho hia paa wɔ Kristofo asafo no mu. Afei wubetumi aboa onuawa no ma wahu sɛ ɔka Yehowa nguan nkumaa no ho, enti Yehowa dwen ne ho paa.
Ade biako a yɛn nuanom ani gye ho ne sɛ wɔbɛkyerɛ wɔn adwene wɔ kyerɛwsɛm bi ho. Enti nnye nkɔmmɔ no mmɔ so; ma ɔnkasa bi. Sɛ wokɔsra onua bi na wo ne no kenkan kyerɛwsɛm bi a, wubetumi atwe adwene asi emu asɛm bi so na woabisa no sɛ ɔte ase anaa. Yɛmfa no sɛ ɔpanyin ne onua bi akenkan 2 Korintofo 4:16. Ɔpanyin no betumi abisa onua no sɛ, “Wokae bere bi a Yehowa yɛɛ wo ‘foforo’ anaa ɔhyɛɛ wo den?” Sɛ wubisa nsɛm saa a, ɛbɛma ‘obiara anya nkuranhyɛ afi ne yɔnko hɔ.’—Rom. 1:12.
Yɛn nuanom ani gye ho sɛ wɔbɛkyerɛ wɔn adwene wɔ kyerɛwsɛm bi ho
Sɛ wunim tebea a onua bi wom a, wubetumi afa Bible mu nipa bi a n’asɛm ne onua no de di nsɛ na wo ne no asusuw ne ho. Sɛ onua no ahaw a wubetumi ne no asusuw Hanah anaa Epafrodito ho. Bere bi Hanah ne Epafrodito faa ateetee mu nanso na wɔda Onyankopɔn koma so. (1 Sam. 1:9-11, 20; Filip. 2:25-30) Nhwɛso foforo pii wɔ Bible mu a wubetumi de adi dwuma.
MFA NSO HƆ ARA
Wokɔsra onua bi wie a, mfa nso hɔ ara; kɔ so ara ma n’asɛm nhia wo. (Aso. 15:36) Wokɔsra onua bi a, wubetumi ne no ayɛ nhyehyɛe apɛ da bi abom akɔ asɛnka. Bernard yɛ ɔpanyin a ɔde mfe pii asom. Ɔkae sɛ, sɛ ɔkɔsra onua bi na akyiri yi ohyia no a, ɔfa kwan bi so bisa afotu a ɔde maa no no ho asɛm. Ɛyɛ a obisa no sɛ, “Ɛboaa wo anaa?” Ɔpanyin bi yɛ saa a, ɛbɛma wahu nea obetumi asan ayɛ aboa ne nua no.
Ɛsɛ sɛ yɛn nuanom mmarima ne mmea hu sɛ yedwen wɔn ho, yenim nea wɔrefa mu, na yɛdɔ wɔn. Eyi ne biribi a anuanom hia paa. (1 Tes. 5:11) Enti ansa na wobɛkɔ akɔsra onua bi ahyɛ no den no, gye bere susuw ne ho. Bɔ ho mpae. Hwehwɛ kyerɛw nsɛm a ɛfata a wode bɛboa no. Woyɛ saa a, wubenya asɛmpa adwudwo “ɔkra a wabrɛ”!